Tapatapany – Midi Madagasikara
You Are Here: Home → Faits-Divers → 2014 → février → 27 → Tapatapany
Redaction Midi Madagasikara 27 février 2014 Ankadifotsy, bois de rose, Jiolahy, Mandritsara
# Ankadifotsy. Lasan’ny jiolahy ny vola. Tamin’ny alatsinainy hariva tokony ho tamin’ny 7 ora, notafihan’ny jiolahy ny mpivarotra iray teny Ankadifotsy. Nitondra basy kalaky izy ireo. Tsy nahetsika ilay mpivarotra ary dia voatery nanome azy ny vola iray hetsy ariary.
# Mandritsara. Vehivavy roa namonotena. Noho ny fahadisoam-panantenana teo amin’ny lafiny fitiavana dia fantatra fa vehivavy roa no samy namonotena tany Mandritsara. Nihinana poizina izy ireo. Avotra ny iray fa ny faharoa kosa namoy ny ainy.
# Bois de rose. Sarotra ny fanadihadiana. Mananosarotra ny famotorana atao an’ireo teratany tanzaniana 13 tratra tamina trafikana « bois de rose ». Tsy mifandray mihitsy mantsy ny fitenenana fa adika indroa ny teny vao mifankahazo.